आगामी आर्थिक वर्षमा क्षेत्रगत रूपमा कृषकहरूलाई पुरस्कृत गर्छौं – गाउँपालिका उपाध्यक्ष रुचाल – BikashNews
२०७८ जेठ ४ गते १९:४८ विकासन्युज
चौबिसे गाउँपालिका नेपालको प्रदेश १ अन्तर्गत धनकुटा जिल्लाको पूर्वी क्षेत्रमा अवस्थित प्राकृतिक रूपमा सुन्दर एवं रमणीय गाउँपालिका हो । ८ ओटा वडा रहेको यस गाउँपालिकामा १९ हजार २ सय ८३ जनाको बसोबास रहेको छ । गाउँपालिकाको अधिकांश भाग पहाडी भूभागले ढाकेको छ भने यहाँ मिश्रित जातजातिको बसोबास रहेको पाइन्छ । यो गाउँपालिका कृषि उत्पादन तथा पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा चर्चित त छ नै साथै ऐतिहासिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक रूपले पनि फरक विशेषता बोक्न सफल मानिन्छ । गाउँपालिकाले कृषि विकासका लागि के–कसरी काम गर्दै आएको छ, रोजगारी सृजना गर्नमा गाउँपालिकाले कस्तो भूमिका खेल्दै आइरहेको छ भन्ने लगायतका विषयमा सो गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष यज्ञ कुमारी रुचालसँग विकासन्युजका लागि राजिब न्यौपानेले कुराकानी गरेका छन् ।
सर्वप्रथम कृषिबाटै सुरु गरौं, गाउँपालिकाले कृषिक्षेत्रतर्फ के–कस्ता काम गरिरहेको छ ?
हाम्रो पालिकामा खेतीतर्फ किसानको आकर्षण बढ्दै गएको छ । कृषि विकासको लागि कृषिलाई आधुनिकिकरण गर्नमा विशेष जोड दिएका छौं । पालिकामा कृषकहरूलाई कृषिका विभिन्न तालिमहरू दिँदै आएका छौं । यहाँका धेरै नागरिकहरूले कृषि पेसा नै अँगालेका छन् । तरकारी खेतीले राम्रो फाइदा दिन थालेपछि धेरै किसान व्यवसायिक रूपमा तरकारी खेतीतर्फ आकर्षित भएका छन् । १, २, ६, ७ र ८ नं. वडालाई किवी जोनको रुपमा विकास गर्ने भनेर कृषकलाई १६ लाख रुपैयाँ बराबरको विरुवा खरिद गरी वितरण पनि गरेका छौं । कृषकहरूलाई पशुपालनको तालिम पनि दिँदै आएका छौं । धेरै नागरिकहरू कृषि पेशामा आवद्ध भएकाले हामीले पनि पशु र कृषिक्षेत्रलाई नै प्राथमिकतामा राखेका छौं । केही बिदेसिएका युवाहरू पनि गाउँमै आएर पशुपालन र कृषि पेशामा लागेका छन् । कृषि उत्पादनका हिसाबले हाम्रो पालिका उर्वर भूमि भएको ठाउँ पनि हो । युवा शक्तिलाई गाउँमै रोजगारीसँगै आय आर्जनका सम्भावनामा उत्प्रेरित गराउनको लागि जोड पनि दिइरहेका छौं । परम्परागत खेती प्रणाली छाडेर व्यवसायमुखी बन्नु जरुरी छ ।
कृषि उत्पादन र स्वरोजगारी बढाउनका लागि भनेर विगत वर्षदेखि नै कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएका छौं । गाउँमा समूह, सहकारी तथा व्यक्तिगत लगानीमा कृषिको व्यवसायिकतामा यहाँको कृषकहरू पछिल्लो समय आकर्षित हुँदै आएका छन् । उत्पादन र आम्दानी राम्रो भएपछि उनीहरू व्यवसायिक कृषिमा अगाडि बढ्न थालेका छन् । पालिकामा आलु, खुर्सानी, सिमी, बोडी, धनियाँ, गोलभेँडा, भ्यान्टा, धान र मकै खेती हुने गरेको छ । कृषि सहकारीको साझेदारीमा काम गरेका छौं भने स्थानीयस्तरमा दर्ता भएका कृषि समूहमार्फत पालिकाको समग्र कृषि विकासको लागि काम गर्दै आएका छौं । पालिकामा कृषि समूहको पनि गठन भएको छ । कृषि अनुदानका विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी कृषि विकासको लागि काम गर्दै आएका छौं । कृषक र पालिकाको साझदारिमा हामीले ५० प्रतिशत अनुदानमा बिउ बिजन पनि वितरण गर्दै आएका छौं । पालिकामा फलफूल खेती अन्तर्गत किवी, सुन्तला, कागती, एभोकाडा, उत्दान हुने गरेको छ । भूगोलको अनुसार पालिकाको कृषि क्षेत्रलाई ३ तहमा विभाजन गर्न सकिन्छ । फलफूल खेती विकासको लागि पनि हामीले जोड दिइरहेका छौं ।
सामूहिक कृषि खेती गर्ने कृषहरुलाई प्रोत्साहन पनि गर्दै आएका छौं । पालिकाको सबै वडालाई कृषि पकेट क्षेत्रको रूपमा छुट्याई कृषि विकासको कामहरू अगाडि बढाएका छौंं । गाउँपालिका भित्र भइरहेको परम्परागत कृषि प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गर्ने हाम्रो लक्ष्य रहेको छ । गाउँपालिकालाई समृद्ध बनाउने आधार नै कृषि हो । गाउँपालिका भित्र तरकारी र फलफूल खेती नै मुख्य रूपमा हुने गरेको छ । उन्नत जातका बाख्रा तथा खसी, स्थानीय जातका कुखुरा पालनसँगै बेमौसमी तरकारी उत्पादन गरिँदै आएको छ । भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्दै कृषि तथा पशुपालनलाई वृद्धि गर्दै लैजाने योजना हाम्रो रहेको छ । कृषि क्षेत्रबाट कतिपय कृषकहरुले राम्रो आम्दानी गर्न पनि सफल भएका छन् । खेती योग्य जमिनलाईलाई बाँझो नराख्न पनि आग्रह गरेका छौं ।
यहाँका धेरैजसो नागरिकहरू कृषि पेशामा नै आवद्ध छन् । पालिकाको मुख्य पेशा खेती किसानी भएको कारण यहाँ प्रायः सबै नागरिकले कृषि पेशा नै अँगालेका छन् । करिब ८५ प्रतिशत मानिसहरू कृषि पेशामा आबद्ध छन् भन्न सकिन्छ । हामीले कृषकहरूलाई एकिबद्धता गर्नको लागि टोल सुधार समिति अन्तर्गत काम गर्ने भनेका छौं । सामुहिक कृषि विकासको लागि पनि जोड दिएका छौं । हामीले राम्रो कृषि उत्पादन गर्ने किसानलाई प्रोत्साहन स्वरूप सहयोग गर्ने गरेका छौं । यो आर्थिक वर्षमा किसानहरूलाई कोभिडको कारण पुरस्कृत गर्न सकेका छैनौं । आगामी आर्थिक वर्षमा क्षेत्रगत रूपमा कृषकहरूलाई पुरस्कार दिने योजना रहेको छ । हामीले व्यक्तिलाई भन्दा पनि समूहलाई पुरस्कृत गर्ने योजना बनाएका छौं । गाउँपालिकाको वडा नं. ६ र ५ लाई सुन्तलाको पकेट क्षेत्रको रूपमा लिइन्छ भने कृषकहरूले उत्पादन गरेका वस्तुहरू धरान निकासी गर्ने गरिन्छ ।
कोरोनाको संक्रमण पुनः बढ्न थालेको छ, संक्रमण दरलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि कस्तो भूमिका खेल्दै हुनुहुन्छ ?
कोरोना संक्रमणबाट हाम्रो पनि पालिका दिन प्रतिदिन प्रभावित बन्दै गएको छ । तीव्र गतिमा फैलिरहेको नयाँ भेरियन्टकोे कोरोना भाइरस पालिकामा पनि बढ्दो रूपमा फैलिएको कारण पालिकाको अत्यावश्यक बाहेकका सबै सेवा बन्द गरेका छौं भने स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउन अपिल गरेका छौं । कोभिडले पालिकाको समग्र विकास निर्माणको र विभिन्न क्षेत्रहरूमा प्रभाव पारेको छ । हामीले सबै नागरिकलाई घरमा नै बस्न आग्रह गरेका छौं । पालिकामा कोरोना संक्रमित पनि बढ्दो छ । पालिका स्तरको हामीले पालिकामा नै कोभिड अस्पतालको निर्माण गरेका छौं । हामले कनट्र्याक्ट ट्रेसिङ मेशिन पनि खरिद गर्ने निर्णयगरेका छौं । हामीले भोजभतेर तथा आमसभाका नाममा धेरै भिडभाड नगर्न पनि आग्रह गरेका छौं । पालिकामा प्रवेश गर्दा मास्क तथा स्यानिटाइजरको प्रयोग अनिवार्य गरेका छौं ।
संक्रमण विस्तार रोक्न बजार, विद्यालय, विभिन्न संघसंस्थाहरूमा भिडभाड कम गर्न पनि आग्रह गरेका छौं । कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर सुरु भएसँगै पालिकाले सचेतनाका विभिन्न सूचनाहरू प्रकाशन गरेका छौं । दोस्रो लहरको रूपमा फैलिएको कोभिडको संक्रमणबाट बच्नु र बचाउनु हामी सबैको अहिलेको प्रमुख जिम्मेवारी पनि हो । यसका लागि पालिकामा आइसोलेसन सेन्टर सञ्चालन गर्ने, अस्पतालहरूको क्षमता विकास गरेर धेरैभन्दा धेरै बिरामीको उपचार गराउने, कोभिडबाट सक्रमित भएका र नभएका दुवै थरीका बिरामीलाई अस्पताल आवतजावत गर्न जोखिमपूर्ण ठाउँलाई निःसंक्रमण गराउने लगायतका काम गरिरहेका छौं ।
पालिकाका धेरै नागरिकहरूलाई कोभिडसँग सम्बन्धित लक्षण देखिएको छ भने नागरिकहरुलार्ई घरभित्र नै बस्नको लागि आग्रह गरेका छौं । पीसीआर परीक्षण पालिकाले निःशुल्क गर्दै आएको छ । संक्रमण दर गत सालभन्दा भयावह भइरहेको छ तर हालसम्मको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दा कोरोनाको प्रभाव उच्च भइसकेको छ । कोरोना न्यूनीकरण गर्नको लागि पूर्वतयारी अवस्थामा जुटेका छौं । यस समयमा बाहिरी जिल्लाबाट पालिकामा प्रवेश गर्ने नागरिकहरूलाई १४ दिनसम्म क्वारेन्टिनमा बस्नको लागि अपिल गरेका छौं । हामीले मास्क क्वारेन्टिनलाई भन्दा होम क्वारेन्टिनलाई नै जोड दिएका छौं ।
हामीले शैक्षिक क्षेत्रको विकासको लागि धेरै काम गर्दै आएका छौं । पालिकामा विभिन्न शैक्षिक सुधारको कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन हुँदै आएका छन् । सबै विद्यालयहरुमा पालिकाको तर्फबाट भौतिक पूर्वाधार विकासको निमित्त हामीले भौतिक संरचनाको पनि निर्माण गरेका छौं । पहाडी भूभाग भएको कारण विद्यार्थीहरूले धेरै हिँडेर विद्यालयसम्म पुग्नु पर्ने अवस्था पनि छ । कोभिडको कारण शैक्षिकक्षेत्र पनि प्रभावित बन्दै गएको छ भने हाल सबै विद्यालयहरू बन्द भएका छन् । हामीले अब व्यवसायिक शिक्षा विद्यार्थीलाई दिनुपर्छ जोड दिएका छौं । शिक्षकहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्न लागि विभिन्न विज्ञयहरुबाट तालिम पनि दिँदै आएका छौं । गुणस्तरीय शिक्षा विद्यार्थीलाई कसरी दिन सकिन्छ भन्ने विषयमा हामी विद्यालयको प्रधानाध्यापक र समितिसँग पनि छलफल गरिरहेका हुन्छौं । प्रविधि मैत्री शिक्षा हुनु पर्छ भनेर हामी लागि परेका छौं ।
शिक्षा विकासका लागि गरिब, जेहेन्दार तथा विपन्न बालबालिकालाई छात्रवृत्ती प्रदान गर्ने गरेका छौं । शैक्षिक सुधारको लागि हामीले विशेष जोड दिएका छौं । परीक्षा प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने काम पनि भइरहेको छ । पालिकाको सबै विद्यालयमा रमाइलो कक्षाको पनि सञ्चालन गरेका छौं । शिक्षाबाट कुनै पनि विद्यार्थी बन्चित नहुन् र उनीहरूलाई विद्यालयसम्म ल्याउनको लागि हामीले रमाइले कक्षाको व्यवस्थापन गरेका हौं । पालिकामा ४४ ओटा विद्यालयहरू रहेका छन् । पालिकमा बाल विकास केन्द्र पनि रहेको छ । पालिका भित्र रहेको विद्यालयमा नै विद्यार्थीले सभओभरसीयर, साइन्स, म्यानेजमेन्ट पढ्न चाहे भने हामीले १६ हजारको दरले छात्रवृत्ती र अनुदान दिने व्यवस्था पनि मिलाएका छौं । शिक्षा विकासका लागि भनेर हामीले शिक्षा ऐनको निर्माण गरेका छौं । शिक्षा नियमावली, कार्यविधी तथा निर्देशिका बनाएका छौं । यो दायरा भित्र बसेर हामीले शिक्षाको गुणस्तरलाई माथि ल्याउनुपर्छ भनेर प्रत्येक वडाका १ जना विद्यार्थीलाई मात्र छनोट गरी छात्रवृत्ती दिने व्यवस्था मिलाएका छौं ।
घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको कुरा तथा निर्वाचित हुँदा बोलेअनुसारका काम धेरै सकिसकेको जस्तो मलाइ लाग्छ । केही कामहरू बाँकी रहेका छन् भने बाँकी रहेको काम यो वर्ष पुरा गर्ने हाम्रो योजना रहेको छ । विकास निर्माणको काममा कोभिडको कारणले ठुलो असर पुर्याएको छ । अब हाम्रो कार्यकाल १ वर्ष मात्र बाँकी रहेको छ । यो कार्यकाल भित्र बाँकी रहेको काम सक्छौं भन्ने आशा छ । काम नै गर्न नसक्ने कुराहरू घोषणापत्रमा लेखेको थिएनौं । पर्यटन विकास, शैक्षिक सुधार आदि काम गर्ने भनेर हामीले घोषणापत्रमा लेखेका थियौं । पूर्वाधारको विकासमा पनि हामीले जोड दिइरहेको छौं । घोषणापत्रमा लेखेको कुराले मात्र पालिकाको विकास गर्न पुग्दैन । हामीले गर्छौं भनेको कुरा बाहेक अरू कुराहरू महत्वपुर्ण पनि हुन सक्छ भनेर समग्र पलिकाको नै विकास निर्माणमा लागेका छौं ।
पालिकाका हरेक महिलाको क्षमता विकासका लागि हामी लागि परेका छौं । महिलाहरू हिंसात्मक गतिविधिबाट पीडित भएको कारण सामाजिक आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्रमा अगाडि बढाउनु पर्छ भनेर हामी लागिपरेका छौं । दलित विपनलाई रोजगारी मूलक बनाउनु पर्छ भनेर स्वारोजका कार्यक्रम पनि अगाडि बढाएका छौं । हामीले न्यायिक क्षेत्रमा पनि धेरै काम गर्दै आएका छौं । सांस्कृतिक कलाको संरक्षण गर्न पनि हामी लागि परी खेलकुद विकासको लागि पनि हामीले धेरै काम गर्दै आएका छौं । ‘एक वडा एक खेल मैदान’ को अवधाण अगाडि सारी प्रत्येक वर्ष खेल मैदान निर्माणको लागि १० लाख रुपैयाँ बजेट पनि छुट्याएका छौं । पालिकामा अब ३ ओटा वडामा मात्र खेल मैदानको निर्माण गर्न बाँकी छ । समाज विकासको लागि र महिलाको क्षमता विकासको लागि पालिकामा हरियो झन्डा कार्यक्रम पनि रहेको छ । सुत्केरी महिलाको पोषणलाई विशेष ध्यान गरी ‘शिशुलाई नाना र आमालाई खान’ भन्ने कार्यक्रम पनि हामीले सञ्चालन गरेको छौं ।
हाम्रो पालिका पर्यटनको प्रचुर मात्रमा सम्भावना बोकेको ठाउँ हो । पालिकामा पर्यटकीयस्थलहरु पनि धेरै रहेको छन् भने प्राकृतिकरूपले पनि हाम्रो पालिका निक्कै सुन्दर छ । न्यानो समशीतोष्ण र चिसो समशीतोष्ण प्रकृतिको हावापानी पाइने हाम्रो पालिकामा तल्लो तथा होचो भू–भागमा निकै न्यानो वातावरण छ भने उच्च ठाउँहरूमा निकै चिसो प्रकृतिको हावापानी महसुस गर्न सकिन्छ । हामीले पालिकामा जनजातिहरूको संग्रहलय पनि खोलेका छौं भने मगर संग्रलय पनि रहेको छ । पर्यटन विकासको लागि पर्यटन पूर्वाधार तयार पारेका छौं । पर्यटन विकासको लागि हामीले विशेष जोड दिइरहेका छौं । पर्यटन विकासको लागि होमस्टेको पनि निर्माण गर्ने योेजनामा छौैं । रानीताल (मावारक), नागबेली पार्क, पुण्य मा.वि., सिद्धदेवी, बोधे गढी, हम्वे दरबार, हांसेमालुङ, थाक्केलुङ, त्रिवेणी, मिक्लाजुङ पर्वत, सिंहदेविस्थान आदि पर्यटकीय स्थलको रूपमा निकै चर्चित छन् । पालिकामा प्रवेश गरेका पर्यटनहरू लामो समयको लागि भेडेटार हुँदै नाम्जेको आत्माघर, ओख्रेको टावर तथा डाँडाबजारको ध्वजे डाँडा र एशियाकै ठूलो वरको रूख भ्रमण गरेर चौबिसे गाउँपालिका प्रवेश गर्न सकिन्छ । पलिकाको मौनाबुधुकको सिद्धदेवी मुढेवासको सिंहदेवीस्थान हुँदै वडा नं. ६ मा रहेको बुधबारेको मुक्लाजुङको रमाइलो भ्रमण गर्न सकिन्छ र यहाँबाट देख्न सकिने ठाउँहरूको रमाइला–रमाइला दृश्यावलोकन गर्न सकिन्छ । पालिकामा रहेको मठमन्दिरको संरक्षण गरी मन्दिरको निर्माण गरिरहेका छौं । हामीले पर्यटकीय स्थलहरूलाई सफा राख्न पनि विशेष ध्यान दिएका छौं । परम्परागत संस्कृतिको संरक्षण तर्फ ध्यान दिई पालिकामा आन्तरिक तथा वाह्य पर्यटक ल्याउन हामीले जोड दिइरहेका छौं । देशका विभिन्न ठाउँबाट यहाँ मानिसहरू आउने गरेका छन् । कोरोनाले गर्दा पलिकाको पर्यटकीय क्षेत्रमा पनि ठूलो असर पुर्याएको छ ।
हाम्रो पालिकाको सबै वडामा सडक सञ्जालको पहुँच पुगेको छ । कोशी राजमार्ग अन्तर्गत भेडेटारबाट पूर्व करिब १९ किलोमिटरको दुरीमा अवस्थित राजारानीबाट गाउँपालिका प्रारम्भ भई १ र ६ नं.मा पुग्दा सो सडकखण्डको लम्बाई ४६ किलोटिर हुन्छ । धरानदेखि भेडेटार–डाँडाबजार–राजारानी हुँदै मौनाबुधुक, बोधे, आइतबारे, मुढेवास तथा ६ नं. वडामा रहेको बुधबारे, शुक्रबारे, कुरुले नियमित यात्रुवाहक बस सञ्चालन हुने गर्दछ । यो वर्ष देखी पालिकाको प्रत्येक वडामा ग्रबेल गर्ने योजना बनाएका छौं । ग्राबेल गरेका सडकहरु मात्र पालिकामा बाह्रै महिना सञ्चालन हुने अवस्थामा छ । सबै वडामा सडक पुगे पनि कच्ची सडक पालिकामा धेरै छन् । पालिकाका केही सडकको स्तरोन्ती पनि गरेका छौं ।
स्थानीय स्तरका युवाहरूलाई रोजगारीको सिर्जना गर्नमा पालिकाले कस्तो भूमिका खेलेको छ ?
यहाँका अधिकांश मानिसहरू कृषि पेशामा संलग्न रहेको पाइन्छ । कृषिका अतिरिक्त केही मानिसहरू सरकारी तथा गैरसरकारी सेवामा संलग्न रहेका छन् भने केही व्यापार व्यवसायमा संलग्न भएका छन् । धेरै मानिहरु ज्यालामज्दुरी गरेर गुजारा गरिरहेका छन् । धेरै यूवाशक्ति भने वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेको छन् । युवाहरूको सिप विकासको लागि प्राविधिकसँग अन्तर सम्बन्धित विभिन्न तालिम पनि दिँदै आएका छौं । आर्थिक विकाससँग अन्तरसम्बन्धी पालिकाले प्रयोग गरेको योजनालाई रोजगार सिर्जना हुने गरी कृषिमा युवाहरूलाई जोडिनको लागि आग्रह गरेका छौं । पालिकामा जनचेतनाको पनि अभाव रहेको छ । युवाहरू कृषि उत्पादनसँग जोडिनु पर्छ भनेर हामीले जोड दिएका छांै । पालिकामा युवाहरूले व्यवसायिक खेती गरी रोजगारी मूलक पनि बनिरहेका छन् । धेरै रोजगारी सिर्जना गर्नको लागि पालिकामा ठुलो उद्योग त छैन । विभिन्न युवा स्वरोजगारका तालिमहरू पनि दिँदै आएका छौं । हामीले एउटा बाटो बसायौं भने आगमि निर्वाचित भएर आउनेले निरन्तरता दिनु हुन्छ भन्ने हाम्रो आशा रहेको छ । युवाहरूको समूह गठन गरी प्रत्येक वडामा युवाहरूलाई सामूहिक व्यवसायमा लानको लागि जोड गरिरहेका छौं ।
स्थानीय सरकारको व्यवस्थापनको सन्दर्भमा २ ओटा पक्ष जस्तो कर्मचारी र जनप्रतिनिधि पक्ष्य हुन्छ । जनप्रतिनिधिको काम भनेको नीति बनाउने र निर्णय गर्ने हो । कार्यान्वयन गर्ने भनेको कर्मचारीले हो । सही तरीकाले काम गर्ने र सञ्चालन गर्न सक्ने कर्मचारी भइदियो भने मात्र सोचेको जस्तो काम गर्न सकिन्छ । कर्मचारी र जनप्रतिनिधि बिचको सम्बन्ध सुमधुर रहेको छ । जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको सामूहिक भावनाले मात्रै पालिकाको विकास निर्माणको काम देखि लिएर अन्य काम गर्ने सकिन्छ । हालसम्म कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको मनमुटाब भएको छैन । नागरिकको आवश्यकता पुरा गर्नमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारी खटी रहेका छौं । जनताको सेवाको लागी तत्पर रहन सबै कर्मचारीहरूलाई आग्रह गरेको छु । कर्मचारीको सहयोगमा नै विकास निर्माणको काम अगाडि बढाउने हो । अहिलेसम्म सम्बन्ध राम्रो नै रहेको छ ।
१ वर्ष मात्र हाम्रो कार्यकाल रहेको छ । १ वर्षको अवधिमा पनि धेरै काम त गर्न सक्छौं । सबैको सामूहिक भावनाले मात्र विकास निर्माणको काम गर्ने हो । स्थानीय तहमा सुशासन कायम गर्नको लागि कानुनी पाठ्यक्रमको व्यवस्था गर्छौं । पालिकाको प्रत्येक वडामा टोल सुधार समितिको गठन भएको छ । टोल सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत हामीले एउटै टोलमा आवद्ध गराएर त्यहाँको आवश्यकता अनुसार प्रत्येक वडामा पास बुक दिने छौं । यो पास बुकमा सम्पूर्ण कुरालाई समेटेर टोल सुधार समिति मार्फत आएको योजनाहरूलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न छौं । पालिकाका विकास निर्माणको कामहरू योजना बनाएर नै गरिरहेका छौं । जनताको आर्थिक स्थिति सुधार गर्नको लागि कृषि र पशुको क्षेत्रलाई विकास गर्ने प्रयासमा छौं ।
उद्यम शिल महिलाको लागि घुम्ती कोषको निर्माण गर्ने छौं । नागरिकको जीवनस्तरलाई उकास्ने र पछाडी परेका टोलक्षेत्रलाई विकास गर्ने सोचमा पनि बनाएको छु । यहाँका जनताले भोलिका दिनमा पनि मैले गरेका कामहरूबाट लाभ लिइरहन सकुन् भन्ने चाहना छ । हामीले पालिकास्तरको योजना तयार पारेका छौं । यो योजना पुरा गर्नमा विशेष जोड दिएका छौं । आर्थिक विकास, पर्यटन विकास आदिका कुरालाई दिर्घकालिन योजना बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने तथ्यमा जोड दिएका छौं । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पूर्वाधार विकासको कुरामा पनि हामी ध्यान दिइरहेका छौं । प्रत्येक ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई सम्मान पनि गर्दै आएका छौं । एकल महिलालाई पनि सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो नीति रहेको छ ।
अन्त्यमा, आफ्ना पालिकाका वासिन्दाहरुलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?
विश्वभर महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसबाट सबै नागरिकहरू सचेत रहौं भन्न चाहन्छु । मानिसहरुले सोचे भन्दा बढि पालिकामा कोभिड फैलिरहेको छ । सबै नागरिकहरूलाई स्वास्थ्यमा विशेष ध्यान दिऔं, स्वास्थ्यसम्बन्धी सुरक्षाका न्यूनतम मापदण्ड अपनाऔं, आफू बचौं, अरूलाई पनि बचाऔं भन्न चाहन्छु । पालिकाका बासिन्दालाई सचेत र सुरक्षित रहन पनि आग्रह गर्छु ।